Archive du 20190315
Andry Rajoelina Tsy dia mazoto miasa eny Iavoloha
Fa maninona tokoa ary ny filoham-pirenena ankehitriny, Andry Nirina Rajoelina, no tsy dia mazoto miasa eny Iavoloha fa ao Ambohitsirohitra matetika? Fanontaniana maha lasa saina ny mpanara-baovao io.
Kandida tsy mahafeno dosie Efa taratry ny tsy fahamatorana sahady
Tapitra omaly tamin’ny 5 ora hariva ny famenoana ny antontan-taratasin’ireo kandida solombavambahoaka mety nisy tsy ampy na tsy feno dosie. Marihina fa nanomboka ny 26 febroary hatramin’ny 12 martsa teo ny fanaterana ny antontan-taratasy.
Fanendrena governoran’ny faritra Misy zavatra mampiahiahy
Nangingina tato ho ato ny resaka fanendrena governora izay efa ambetin-kabarin’ny filoham-pirenena ankehitriny, Andry Rajoelina, teo aloha teo.
Fanatsarana ny fizahan-tany Hisy ny fanisana ireo mpisehatra
Hanisa ireo mpandraharaha misehatra amin’ny fizahan-tany eto Madagasikara ny Ministeran’ ny fitaterana, ny fizahan-tany ary ny fampahafanatarana any toetr’andro amin’ny 08 Aprily 2019.
Trafikana zaza Tsy nitsikombakomba izany izahay, hoy ny fianakaviana
“Niady mivady mihitsy izahay, toa ny adala, maizina ny tany aman-danitra”. Izany no teny voalohany nivoaka ny vavan’ilay renim-piakaviana very zaza.
« Comité de normalisation de la FMF » Mbola tsy nahitan-teny taorian’ny fanambaran’ny minisitra
Mbola tsy nandrenesam-peo hatreto ny “Comité de normalisation de la Fmf” mikasika ny tenin’ny ministry ny fanatanjahantena Malagasy, Tinoka Roberto,
Ekipan’ny VBCD Volley Ball Efa manomana fatratra ny taom-pilalaovana 2019
Tazana manoman-tena fatratra teny amin’ny kianja ivelan’i Mahamasina nanomboka tamin’ny talata 12 martsa lasa teo ny ekipan’ny VBCD Volley Ball sokajy 1DM sy 1DF eto Analamanga izay vonona tanteraka hiatrika ny taom-pilalaovana vaovao 2019 eo amin’ity taranja ity.